be herim-po Leadership — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ity MLK mpitarika ny be herim-po amin'ny miseho (tsy lazaina intsony ny sasany amin'ireo soratra tsara indrindra hatramin'izay aho namaky). Tsy mety ny hanaraka lalàna tsy ara-drariny sy tsy mety hiandry amim-paharetana. Izy maka ny dingana voalohany ho an'ny iray firazanana ny olona rehetra. Amin'ny maha-lehilahy mainty, Feno fankasitrahana lalina aho ho an'Andriamanitra noho ny asa tanteraka amin'ny alalany. Ary toy ny Kristianina, Te-hiady ho amin'ny rariny araka mafy tahaka ny nataony, fitandremana ao an-tsaina fa i Jesosy ihany no afaka mitondra ny rariny tonga lafatra. Ary Izy no.
Ity ny ampahany avy amin'ny MLK ny malaza taratasy. Tokony hamaky ny zavatra rehetra rehefa tonga ny fahafahana.
"No antenainay mihoatra noho 340 taona ho an'ny lalàm-panorenana sy Andriamanitra nomena zo. Ny firenena Asia sy Afrika dia mifindra amin'ny jetlike haingana ho amin'ny fahaleovan-tena ara-politika hahazoana, nefa mbola mikisaka amin'ny soavaly sy kalesin-haingana amin'ny fahazoana ny kapoaka ny kafe amin'ny sakafo antoandro manohitra. Angamba dia mora ho an'ireo izay tsy mbola nahatsapa ny zavamaniry zana-tsipìka ny fanavakavahana ny hoe, "Andraso." Fa raha nahita masiaka vahoaka romotra Lynch ny reny sy ray amin'ny sitrapony sy handentika ny rahavavy sy rahalahy ao amin'ny haitraitra; Ary rehefa hitanao feno fankahalana polisy manozona, mandaka sy mamono mihitsy aza ny rahalahy sy anabavy mainty hoditra; rehefa mahita ny ankamaroan'ny ny roa-polo tapitrisa Negro rahalahy smothering amin'ny airtight tranom-borona ny fahantrana eo amin'ny fiaraha-monina iray manankarena; rehefa tampoka Tadiavo ny lela Nandika vilana sy ny teny miambakambaka rehefa mikatsaka ny manazava amin'ny enina taona vavy hoe nahoana izy tsy afaka mandeha any amin'ny vahoaka fanaovana kermesy izay vao avy dokambarotra amin'ny fahitalavitra, ary jereo ny ranomaso tazonina ao amin'ny masony, saingy efa nilaza fa Funtown dia mikatona ho miloko ankizy, ary jereo ny filazana loza izao ny rahona ho ambany manomboka ny endrika ao an-tsaina kely lanitra, ka mahita ny manomboka ny hanova ny toetra amin'ny alalan'ny fampivelarana ny mahatsiaro tena mangidy amin'ny fotsy hoditra; raha tsy maintsy hamorona valiny mandritra ny dimy taona izay mangataka zanaka: "Dada a!, Nahoana no hitondra ny miloko fotsy hoditra ny olona toy izany hoe?"; rehefa maka ny hazo fijaliana faritra fiara ka mahita fa ilaina ny matory alina rehefa alina ny aina zorony ny fiara satria tsy misy Motel dia hankasitrahako ianareo; afa-baraka ianao rehefa andro sy andro izany amin'ny alalan'ny famantarana nanorisory mamaky "fotsy" sy ny "miloko"; raha ny anarana voalohany lasa "nigger,"Ny afovoany anaranao lasa" zazalahy " (Na izany aza antitra ianao) ary ny farany anaranao lasa "John,"Ary ny vadiny sy ny reny dia tsy nomena ny lohateny hajaina" Ramatoa "; rehefa ianao harried amin'ny andro sy ny fiantraikany alina ny hoe ianao dia Negro, velona foana amin'ny tiptoe fihetsika, tsy tena fantany izay mba miandry manaraka, ary dia namely tamin'ny anaty tahotra sy ny ivelany ny hatezerany; rehefa mandrakizay ianao miady amin'ny degenerating heviny ny "nobodiness" -then ho fantatrao hoe nahoana isika no mahita fa sarotra ny miandry. Misy tonga ny fotoana ny kapoaky ny faharetana mitantana ny, ary ny olona dia tsy vonona ny ho nitsambikina tao anaty lavaka mangitsokitsoka ny kivy. Antenaiko, Ry tompokolahy ô, dia afaka mahatakatra ny ara-dalàna sy tsy azo ihodivirana tsy faharetana. Ianao maneho be fanahiana noho ny fahavononantsika handika lalàna. Izany no mampanahy tokoa ny ara-dalàna. Koa satria isika mampirisika ny olona toy izany tamim-pahazotoana tokoa mba hankatò ny Fitsarana Tampony ny fanapahan-kevitry ny 1954 outlawing fanavakavahana ao amin'ny sekolim-panjakana, Raha vao jerena dia toa paradoxical fa fahatsiarovan-tena ho antsika mba handika lalàna. Mety hanontany iray: "Ahoana no miaro fandikana lalàna sy mankatò ny sasany hafa?"Ny valiny dia mitoetra ao amin'ny marina fa misy karazany roa ny lalàna: marina sy ny meloka. Izaho te-ho voalohany ny miaro hankatò lalàna fotsiny. Ny iray ihany no tsy ara-dalàna, fa ny fitondran-tena fotsiny andraikitra hankatò lalàna. Mifanohitra, ny iray manana andraikitra ara-moraly tsy hankatò lalàna tsy ara-drariny. Miombon-kevitra aho St. Augustin fa "ny tsy rariny lalàna tsy misy lalàna mihitsy."
-Martin Luther King Jr., Taratasy avy amin'ny Birmingham Am-ponja
BornWithPurpose • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:33 aho • navalin'i
Izany no toy izany famaritana jerena ny zavatra fanavakavahana toa. Tena sarotra ny mieritreritra mihitsy aza fa ny tsy rariny io dia tsy hatraiza na dia zato taona lasa izay. MLK dia tsy mampino mpiady sy ny famporisihina nampiasain'Andriamanitra. Ny iray ny toerana tena fotoana nalaina rehetra…. ” Ny haizina tsy afaka nandroaka haizina, Light ihany dia afaka manao izany. Ankahalao tsy afaka nandroaka fankahalana, ny fitiavana ihany no afaka manao izany.”
Sean • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:33 aho • navalin'i
Aza manomboka fehezanteny amin'ny teny mpampitohy toy ny 'fa', na 'toy ny'.